Dumarka Soomaalida oo ka cabanaaya Webseedada qaar. (Waa maxay sababta) - iftineducation.com
iftineducation.com – Dumarka Soomaalida kuwa kunool Magaalada Muqdisho iyo Qurbaha ayaa ka cabanaaya Webseedada qaar ee iyagu aan ilaalin Shuruucda u dagsan Saxaafadda gaar ahaan Arimaha Bulshada.
Dumarka ayaa iyagu ka cabanaada isticmaalka Sawiradooda ee lagu soo daabaco webseedad Qaar iyaga oona sheegay in loo adeegsado Muuqaalkooda qormooyinka arrimaha Bulshada islamarkaana laga diyaariso Qoraalo Fadeexo ah oo sumcadooda wax u dhimaayo.
Hooyo Seynab Xassan oo kunool Magaalada Muqdisho waxa ay shabakada iftineducation ka codsatay inay daabacdo Warbixinta ay dumarka ku cambaareynaayan Webseedada qora arimaha Bulshada waxa ayna sheegtay Maamo Seynab in Muuqaalka Sawirkeeda loo adeegsaday Maqaal ka hadlaaya dumarka iyada aan arinkaasi waxba ka Ogeyn ay lasoo xiriiren wiilasha la dhashay islamarkaana ku canaantay inay joojiso soo bandhigida muuqaalkeeda Hayeeshe Hooyo Seynab arinkaasi waxba kama aynan ogeyn.
Hooyo Seynab oo fariin soo gaarsiisay Shabakada iftineducation ayaa tiri ‘’Waxaa nasiib daro ah in Webseedad qora arimaha Bulshada ay shacbiyad ku raadsadaan soo bandhigida muuqaalka Dumarka Soomaalida taasina ay waxbadan u dhibeyso sumcada Webseedad, waxaa la isticmaalay muuqalkeyga waxaana leyga qoray qoraal aan asluub lahayn mana kawarqabin waxaana ila soo xiriiray wiilasha ila dhashay iyaga oo igu canaantay in aan webseedadaasi u diray muuqalkeyga balse aniga waxba kama aan ogeyn waxa ayna danta igu qasabtay in aan webseedad uga digo inay Shacbiyad ku raadsadaan muuqaalka Gabdhaha masaakiinta ah oo ay soo daabacaayan’’ sidaa waxaa yiri hooyo Seynab.
Haweenka naasaha waa weyn leh oo la sheegay inay khatar u yihiin Kansarka ku dhaca Naasaha “Breasts Cancer”
Haweeney ka soo duushay dalka Colombia ayaa naasaha qaab qaliin ah ku soo gashatay daroogada dilaaga ah ee loo yaqaan,,,?